Security | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Keyscrambler Presonal ဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် တွေကို Keylogger များရန်မှ ကာကွယ် နိုင်ရန် အတွက် စီမံ ပေးနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် တွေကို ခြေရာ ခံမယ့် Keylogger များကြား ဖြစ်၍ မှတ်တမ်း တင်တဲ့ အခါမှာ Keyword များကို Encrypt ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပြီး အချက် အလက် တွေကို အခြား သူများ အလွယ် တကူနဲ့ ဝင်ရောက် အသုံး မပြုနိုင်စေရန် အတွက် စီမံပေး ထားပါတယ်။
Windows XP မှ Windows 10 အထိ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲ အမျိုးအစား - Privacy Software
ဗားရှင်း - 3.8.1
ဖိုင်အရွယ်အစား - 1.48 MB
အသုံးပြုနိုင်သည့် OS - Windows XP/Vista/7/8/10
အသုံးပြုချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
Original link - http://www.internetjournal.media/download/4212
ကဏ္ဍ Key protecter, Security
Spyrix Personal Monitor လေးကတော့ keyboard (Keylogger) activity, activity on social networks (Facebook, MySpace etc.), web-surfing, Skype, IM Messengers (ICQ, MSN etc.), external storages (USB, CD, DVD, HDD, memory cards) စတဲ့ Active application activity တွေကို ဖေါ်ပြ ပေးနိုင် ရုံမျှ မက ထိထိ ရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် multifunctional program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Full Version လေးရအောင် အထဲမှာ Patch File လေးပါ ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ်။
Patch File လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ရင် Full Version လေးရပါပြီ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 19 MB ရှိပါတယ်.။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/VKZmUoJ1svs/spyrix-personal-monitor-803-multilingual.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာ အင်တာနက် ဆာဗာပေါင်း 5000 ကျော်တွေမှာ ဒီ Anti DDoS Guardian Tool လေးကို DDoS တိုက်ခိုက်မှု ရန်ကနေ ကာကွယ် နိုင်အောင် အသုံးပြုနေ ကြပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကတော့ IIS servers, Apache serves, game servers, Camfrog servers, mail servers, FTP servers, VOIP PBX,SIP servers တွေနဲ့ တခြားသော Servers တွေကိုလည်း DDoS တိုက်ခိုက်မှု ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
SYN flood, TCP flood, UDP flood, ICMP flood, bandwidth attacks တွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2012 တွေရဲ့ 32 bits ရော 64 bits အတွက်ကိုပါ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tools လေးတစ်ခုပါ။ Full Version လေးရအောင် အထဲမှာ Crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
▼ ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး ဒေါင်း ယူပါ ▼
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/ShbhQuJYYJI/anti-ddos-guardian-33.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
Anti Porn 22.0.4.10 Patch Crack 2015 Full Version Size(5.6MB)
အင်တာနက် ဆိုင်များ နှင့် ကလေး ငယ်များ ရှိသော အိမ်တိုင်းတွင် ဆောင်ထား သင့်သည့် Anti Porn Security ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲ လေးက ညစ်ရမ်းသော ဝက်ဆိုဒ် များကို blocking လုပ်ထား နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြု ခွင့်ကိုလည်း နေ့နှင့် အချိန်နှင့် ကန့်သတ် ထားနိုင် ပါတယ်။
Settings ပိုင်း ကိုလည်း Password ဖြင့် ခံထားနိုင် ပါတယ် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက် တွေလည်း အများ အပြား ပါရှိပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 15, 2015 No comments: